OSX တွင်ဖောင့်အသစ်များမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း ငါက Mac ကပါ
ပါပလော Aparicio | | Mac OS X ကို, လဲ tutorial
ငါ Mac သို့ပြောင်းလိုက်သောအခါမှတ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၂၄ ac iMac ကိုထုတ်ပြီးနောက်၎င်းကိုဖွင့်ပြီးနောက်ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တာကကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုယူပြီး MSN မှအဆက်အသွယ်တစ်ခုကို Mac မှမည်သို့ ၀ င်ရမည်နည်းဟုမေးခြင်းဖြစ်သည်။ Adium ကိုသုံးဖို့ဒါကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာရှာပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး၊ သင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဘယ်လိုသွင်းရမလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အိုင်ကွန်ကို Applications ဖိုဒါထဲကိုဆွဲယူရတာရိုးရှင်းပြီး၎င်းပရိုဂရမ်တွင်၎င်းသို့မဟုတ်ပိုနည်းသည်ကရှင်းပြသည်။ ဒါဟာပလက်ဖောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်အရာဖြစ်တယ်။ ယခုတွင်ငါသည် Mac တွင်ရှိနေစဉ်၊ ဖောင့်အသစ်ထည့်ပါ.
ငါမှားလား (ဒါအရမ်းဖြစ်နိုင်တယ်) ဖြစ်စေ Windows မှာမလွယ်ဘူး။ Mac ပေါ်မှာအရာအားလုံးပိုပြီးလွယ်ကူပြီး OS ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရာမှာတစ်နှစ်ခွဲကြာလျှင်ရိုးရှင်းသောလုပ်ရပ်များအတွက်ပြifနာရှိနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်ရေးသားလိုသောအရာအတွက်သင့်တော်သောဖောင့်အသစ်များတပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်အလိုလိုသိသောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်တွင် Mac ကိုမည်သို့စတင်သုံးစွဲရမည်ကိုမေးမြန်းသူတစ် ဦး ကသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ရှင်းပြပါ တစ် ဦး ချင်းစီအဆင့်.
1 OS X တွင်ဖောင့်များထည့်သွင်းပုံ
2 OS X အတွက်စာလုံးဖောင်းကားများကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်ရမည်နည်း။
3 သင်၏ Mac တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်စာသားဖောင့်များကိုကြည့်ရှုရန်
OS X တွင်ဖောင့်များထည့်သွင်းပုံ
ကျနော်တို့ font ကို download လုပ်ပါ။
ဖိုင်ကို download လုပ်ထားသောဖိုင်တွဲသို့သွားသည်။ အများအားဖြင့် compressed ဖိုင်တစ်ခုကို download လုပ်သည်။
ဖိုင်ကို၎င်းကိုနှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့် unzip လုပ်ပါ။
ယခု .TTF ဖိုင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ဖွင့်လှစ်သော ၀ င်းဒိုးတွင်ဖောင့်မည်သို့ကြည့်မည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ စတိုင်တစ်ခုထက်ပိုသောစာလုံးစောင်းသို့မဟုတ်စာလုံးစောင်းများရှိပါကပုံတွင် Regular ဆိုသော drop-down menu ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်မြင်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Install font ကိုနှိပ်ပြီးစောင့်ပါ။
OS X အတွက်စာလုံးဖောင်းကားများကိုမည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်ရမည်နည်း။
ရင်းမြစ်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်သည် Mac မှကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည် DaFont, သို့သော်သင်သိပြီးဆန္ဒရှိလျှင်အခြားစာမျက်နှာတွင်သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ပုံများတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ဖောင့်သည် DaFont မှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အက္ခရာတင်ထားသောစာလုံးများကိုကြိုက်သကဲ့သို့ငါသည်လည်းသင်လုပ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်ဤစာ၌မည်သည့်စာလုံးကိုခေါ်သည်သို့မဟုတ်သင်မည်သို့ခေါ်နိုင်ကြောင်းသင်သိလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ပါ အင်တာနက်ရှာဖွေရေး.
သင်လိုချင်သောအမည်ကို "font" ဟူသောစကားလုံးနှင့်လိုက်လံရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ "iron maiden font" ကိုရှာဖွေခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ရုပ်ပုံတွေထဲမှာသင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းအတူတူပဲ၊ ဒါပေမဲ့ Metal Lord လို့ခေါ်တဲ့ဖြည့်ထားတဲ့အက္ခရာတွေရှိတယ်။
Metal Lord ဖောင့်
သင်၏ Mac တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်စာသားဖောင့်များကိုကြည့်ရှုရန်
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ operating system ၏မည်သည့်ထောင့်ကိုမဆိုပြောင်းလဲလိုသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၊ အကယ်၍ သင်သည် fonts အမျိုးအစားများစွာကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ နောက်မှကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သောအရာကိုမမှတ်မိလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ ပြproblemနာမရှိဘူး။ ငါတို့အမြဲလုပ်နိုင်တယ် ဖောင့်ကိုကြည့်ပါ ငါတို့ install လုပ်ပြီးပြီ ဤအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါတို့ကိုသာပြုလုပ်ရမည်။
Launchpad ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ် trackpad ပေါ်ရှိလက်ချောင်း ၃ ချပ်ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းအပြုအမူအားဖြင့် (Applications ဖိုလ်ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့သွားနိုင်သည်) ဖွင့်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့အခြားသူများ folder ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့စာစီစာရိုက် Catalog ဖွင့်လှစ်။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာရွေးချယ်စရာ ၃ ခုရှိတယ် -
ကွန်ပျူတာ။ ဒီအပိုင်းမှာ default system နဲ့ install လုပ်ထားတဲ့ fonts တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
အသုံးပြုသူအမည်။ ဤသည်မှာဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာသည်မည်သည့်အက္ခရာများကိုအကွက်မှအမှန်ပင်တွေ့နိုင်သည်မှန်သော်လည်း၎င်းသည် uninstall လုပ်ရန်မထိုက်တန်သည်မှာမှန်ပါသည်။ မည်သည့် typefaces များရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နိုင်သည်။ သို့သော်အခြားဘာမျှမရှိပါ။ User အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောအရာများကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ် ၀ င်စားခြင်းမရှိတော့ပါက၊ right-click သို့မဟုတ် right-click လုပ်၍ Delete family « type of type »ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကိုးကားများအကြားသင်ဖျက်လိုသော font အမျိုးအစားကိုထည့်မည်။ ဥပမာ - Lord Lord (ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်မဟုတ်၊ အရူးအမူးမဟုတ်ပါ) ဥပမာ၏ဖြစ်ရပ်တွင်။
ဒါကြောင့်သင်သိ။ စာလုံးအကြီးအသေးနဲ့ရေးသားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ typefaces တွေထည့်ရမယ်။ ဒီစာမျက်နှာကိုရေးတဲ့အခါငါ Windows စင်မြင့်မှာငါတကယ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတယ် - Metallica အဆိုတော်ဂျိမ်းစ်ဟတ်ဖီးလ်ရဲ့သီချင်းစာသားကိုသူရေးခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူရေးထားတဲ့နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်။ ငါရှာတွေ့နိုင်သလားကြည့်ရှုရန်ဝဘ်ပေါ်တွင်စောင့်ကြည့်မယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဖောင့်အမျိုးအစားကဘာလဲ?
PS: Hetfield ရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒါကို "အမျက်ဒေါသခြစ်ခြင်း" လို့ခေါ်ပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Apple ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးစာလုံးတွေ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » OSX တွင်ဖောင့်အသစ်များထည့်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြaနာရှိနေပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား Photoshop တွင်သာတပ်ဆင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စကားလုံးနှင့်စာမျက်နှာအတွက်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းရှိမရှိကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ OS X El Capitan ဗားရှင်း 10.11.5 ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ mac အသစ်ကိုရရှိပါပြီ။ အစပိုင်းမှာတော့ fonts catalog ထဲမှာ fonts တွေကိုပြproblemsနာမရှိဘဲ install လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အခုငါ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ fonts အားလုံးဟာကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ DaFont မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သောထိုတူညီသောစာလုံးများသည်ကျွန်ုပ်၏ Mac အဟောင်း၌အခက်အခဲမရှိဘဲတင်ထားပြီးပါပြီ။ ငါအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အချို့ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အခုငါမလုပ်နိုင်ဘူး၊ လေးနက်တဲ့အမှားပုံအနီရောင်ပုံပေါ်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်ဖောင့်များကိုမပြောင်းနိုင်ပါ၊ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
မာရီယာနာလည်းကျွန်ုပ်နှင့်ထပ်တူဖြစ်သည်။ ငါဘယ်လိုပြုပြင်ရမှန်းမသိဘူး မင်းအဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့စီမံခဲ့တာလား။
Luis Romero အားပြန်ပြောပါ
လမ်းလည်းမရှိ။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာ Typeface Catalog မှာအလိုအလျောက် load မလုပ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါနောက်တစ်ခုကို install လုပ်တဲ့အခါမှာလုပ်တယ်။ ၄ င်းတို့ကိုကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသော်လည်း (အကယ်၍ တစ်ခုသည်အကျင့်ပျက်။ ပြgivesနာဖြစ်စေလျှင် ၄ မှ ၄ ကိုလုပ်ပါ) သူတို့သည် Microsoft Office ပရိုဂရမ်များ (သို့) iWork ပရိုဂရမ်များ (Keynotes, etc) တွင်မတွေ့ပါ။ သူတို့ကိုငါသာ Photoshop တွင်သုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်အက္ခရာ ၅ လုံးခန့်တပ်ဆင်ပြီးသော်လည်းရုံးထဲသို့ဝင်ရောက်သောအခါသူတို့မပေါ်လာပါက၎င်းသည်ဘာဖြစ်ရကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
အက်ပဲလ်တီဗီကြော်ငြာသစ် - "အနာဂတ် TV သည်အက်ပ်များဖြစ်သည်"